by रबर्ट म्याकमारा
राष्ट्रपति बनेका सचिवहरूको परम्परा 160 वर्ष पहिले समाप्त भयो
1 9औं शताब्दीको मध्यतिर मृत्यु भएको एक राजनीतिक परम्परा राष्ट्रपतिको कार्यालयमा सचिवको पदोन्नति थियो। 19औं शताब्दीका राष्ट्रपतिहरू पहिले राष्ट्रको शीर्ष कूटनीतिको रूपमा सेवा गरिरहेका थिए।
राज्य को स्थिति सचिव को राष्ट्रपति को लागि एक लांचिंग पैड को रूप मा मानिन्छ कि उच्चतम कार्यालय को मांग गर्ने पुरुषहरु को व्यापक रूप देखि राज्य को सचिव को रूप मा कोण गर्न को लागी मानिन्छ।
कामको कत्तिको महत्व तेज फोकसमा ल्याइन्छ जब तपाईले सोच्नु भएको छ कि धेरै प्रमुख, अझैसम्म असफल, 19औं शताब्दीको राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारले पनि पदमा राखेका थिए।
यद्यपि अन्तिम राष्ट्रपति राज्य सचिव भएको जेम्स बुकाननले अप्रत्यक्ष राष्ट्रपतिलाई 1850 सालको अन्तर्वार्तामा चार वर्ष सेवा गरेपछि देश दासत्वको मुद्दामा अलग भइरहेको थियो।
2016 को राष्ट्रपतिको चुनावमा हिलरी क्लिंटनको उम्मीदवारी यो ऐतिहासिक सन्दर्भमा उल्लेखनीय थियो किनभने उनले 160 वर्ष पहिले बुखनको चुनाव पछि राष्ट्रपति बनेको पहिलो सचिव हुनेछ।
राज्य सचिव को कार्यालय अझै पनि एक धेरै महत्त्वपूर्ण कैबिनेट पद हो, अवश्य। त्यसैले यो रोचक छ कि आधुनिक युगमा हामीले राज्यको कुनै सचिवहरू राष्ट्रपति बन्न जान्छौं। वास्तवमा, सामान्यतया कैबिनेटका पदहरू व्हाइट हाउसमा पथ्र्यो।
कैबिनेटमा सेवा गर्ने अन्तिम राष्ट्रपति हरबर्ट होवर थियो। त्यो रिपब्लिकन नामांकित भए जब 1928 मा निर्वाचित भयो त्यो कल्विन कूलज वाणिज्य वाणिज्य को रूपमा सेवा गरिरहेको थियो।
यहाँ राष्ट्रपतिहरू छन् जसले राज्य सचिवको रूपमा सेवा गरिरहेका छन् र साथसाथै राष्ट्रपतिको लागि केहि प्रमुख उम्मेदवारहरू जसले पनि यो स्थिति राखे:
राष्ट्रको पहिलो सचिव, जेफसनले जर्ज वाशिंगटनलाई 1799 देखि 1799 सम्मको स्थितिमा राखे। जेफरसन पहिले देखि नै आजादीको घोषणा लिने र पेरिसमा एक राजनैतिक दलको रूपमा सेवा गर्न को लागी एक सम्मानित व्यक्ति थियो। त्यसैले यो कल्पनायोग्य छ कि जेफसन राष्ट्रको प्रारम्भिक वर्षमा राज्यको सचिवको रूपमा सेवा गरिरहेकाले कैबिनेटमा अग्रणी पदको रूपमा स्थापना गर्न मद्दत गर्यो।
जेम्ससनको दुई सर्तहरूमा जेम्ससनको दुई सर्तहरूमा मेडिसनले राज्यको सचिवको रूपमा सेवा गरे, जुन 1801 देखि 1809सम्मको थियो। जेफर्ससनको प्रशासनमा जवान राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरूको निष्पक्ष साझेदारी गरेका थिए, जसमा बार्बरी समुद्री डाकूहरूसँग लडाइँहरू र ब्रिटिश अमेरिकी सेनासँग हस्तक्षेप गर्नका लागि समस्या उच्च समुद्र।
म्याडिसन राष्ट्रपतिको रूपमा सेवा गरिरहेका बेला बेलायतमा युद्ध घोषणा गरे, एक निर्णय जो अत्यन्त विवादास्पद थियो। विपरित संघर्ष, 1812 को युद्ध, मेडिसनको समयमा राज्य सचिवको रूपमा जडिएको थियो।
मोनरो मेडिसनको प्रशासनमा राज्य सचिव थिए, 1811 देखि 18 17 सम्म। सन् 1912 को युद्धमा सेवा गरिरहँदा मोनरोले अर्को संघर्षको सार्थक साकार भएको थियो। र उनको प्रशासनलाई एडम्स-ओनिस संधिको रूपमा सौन्दर्य बनाउनका लागि जानिएको थियो।
एडम्स 1801 देखि 1825 सम्म राज्य को मोनरो को सचिव थियो। यो वास्तव मा जॉन एडम्स थियो जो अमेरिका को सबै भन्दा ठूलो विदेश नीति घोषणाहरु, मोनरो सिद्धान्त को लागि क्रेडिट को योग्य छ। तर, गोलार्इमा संलग्नको बारेमा सन्देश मोनरोको वार्षिक सन्देश (यूनियन ठेगानाको पूर्ववर्ती) मा डेलिभरी गरिएको थियो, यो एडम्स थियो जसले यसको लागि अधिवेशन गरेको थियो र यसलाई ड्राफ्ट गरियो।
वान बुरेनले दुई वर्ष सेवाका लागि एन्ड्रयू जैक्सनको सचिव 1829 देखि 1831 सम्मको सेवा गरे। जैक्सनको पहिलो पदको अंशको लागि राज्य सचिव सचिव भएपछि उनी ज्याक्सनद्वारा ग्रेट ब्रिटेनमा देशको राजदूत बने। वान बुरेन पहिले नै इङ्गल्याण्डमा आइपुगे पछि उनको नियुक्ति अमेरिकी यूनेट सीनेट द्वारा मतदान गरीएको थियो। वान बुरेनले एक जना दूतावासको रूपमा विनाश गरेका सीनेटरहरूले उनीहरूलाई एक पक्षको काम गरेका छन्, किनभने उनी जनतालाई सहानुभूति दिए र उनीहरूले 1836 मा जैक्सनलाई सफल बनाउन राष्ट्रपतिको रूपमा भाग लिन मद्दत गरे।
बुकानन जेम्स के पोक प्रशासन मा 1845 देखि 1849 सम्म राज्य सचिव थिए। बचनले प्रशासन को समयमा सेवा गरे जो राष्ट्र को विस्तार मा फिक्स गरियो। दुःखको कुरा, अनुभव एक दशक पछि कुनै राम्रो थिएन, जब देशको सामना गर्दा ठूलो समस्या दासत्वको मुद्दामा राष्ट्रको विभाजन थियो।
क्ले 1825 देखि 1899 सम्म राष्ट्रपति मार्टिन वान बुरेन को सचिव को रूप मा राज्य को रूप मा कार्य गरे। उनले धेरै पल्ट राष्ट्रपति को दौड गरे।
Webster 1841 देखि 1843 सम्म विलियम हेनरी हैरिसन र जन टायलर को राज्य को सचिव को रूप मा सेवा गरे। पछि उनले 1850 देखि 1852 सम्म मिलर फिलोरम को राज्य को सचिव को रूप मा सेवा गरे।
जॉन सी। कलोन
क्यालोनले सन् 1944 देखि 1845 सम्म एक वर्षको लागि जन टायलरको सचिवको रूपमा सेवा गरे।
जेम्स मैडिसन, संयुक्त राज्य अमेरिका को चौथो राष्ट्रपतिको जीवनी
Lyndon B. जॉनसन - संयुक्त राज्य अमेरिका को तीस-छठे राष्ट्रपति
अमेरिकी राष्ट्रपति ओथ अफिसको बारेमा
व्हाइट हाउस सौर प्यानलहरूको संक्षिप्त इतिहास
10 कुरा राष्ट्रपति बुशले नागरिक नागरिकहरूको लागि सही गरे
10 आकर्षक राष्ट्रपति स्क्यान्डलहरू
अब्राहाम लिंकन देखि उद्धरण
4 अल्पसंख्य कुरा तपाईंको कारको चिनो इन्जिन लाइट तपाईलाई बताउन सक्छ
शीर्ष 20 देश संगीत प्रेम गीतहरु 1970 को दशक
उपयोगिता को अधिकतम परिचय
शिवास्सु - डिसेम्बर
मन्डुलीनेस विवादास्पद - ​​बौद्ध धर्म बनाम मनोविज्ञान?
कसरी उजुरीको पत्र लेख्न
1993 को शीर्ष 10 गीत
रिचर्ड आर्कवाइट र वाटर फ्रेम
शब्दावली शारीरिक विशेषताहरु को वर्णन
दिग्गजों को बारे मा सर्वश्रेष्ठ र Worst युद्ध सिनेमा
कसरी सृजना गर्ने (वा बचाउन) पूल फेंक जान्नुहोस्
टुन्ड्रामा जीवन: पृथ्वीमा कोल्डेस्ट बायोम
तपाईंको हाइब्रिड गाडी राख्ने
Rattlesnakes अज्ञात अफवाह रैलीन छैन
कोबरा गोल्फ: उपकरण कम्पनी प्रोफाइल
Invertebrates को बारे मा तथ्य
कसरी एक सेलमेल पछि एक Dinghy तिर
फ्लोरिडा पैंथर्स 'रट ट्रिक पछि कथा
ट्रांसमिशन कूलर कसरी स्थापना गर्ने
सांता क्लॉसको बारेमा के सोच्नुहुन्छ ईसाई?